Imaski Yamehlo, Isikhafu, Isigaxa Sentamo - Indwangu Emangalisayo
imfashini yokwakha isikhumba sikasilika esikhunjeni
Yenza isikhafu sikasilika esiyisikwele
Shawl yesikhafu semfashini
Inkampani ezimangalisayo yendwangu ingumklami nomkhiqizi womkhiqizo oseShao Xing China, imikhiqizo yethu eyinhloko ikesi lomcamelo kasilika, ibhonethi yezinwele, ibhande lasebusweni, imaski yamehlo, isikhafu neminye imikhiqizo. Njengomklami nomkhiqizi weminyaka eyishumi, sinokuhlangenwe nakho okuphezulu ekunikezeni insizakalo ye-OEM ODM kumakhasimende avela eBranding Businesses kubathengisi be-e-commerce abanjengo-Amazon, Ali-Express, Alibaba.
Umkhiqizi Ochwepheshe Ngaphezulu Kwama-20Yers ...
2020 / Okthoba
Ngemuva kokugqoka usilika iminyaka eminingi kangaka, ngabe uyaqonda ngempela usilika? Njalo uma uthenga isembatho noma izimpahla zasendlini, umthengisi uzokutshela ukuthi le yindwangu kasilika, kepha kungani le ndwangu kanokusho iyinani elihlukile? Uyini umehluko phakathi kukasilika nosilika? Inkinga encane: kanjani ...